बच्चाको उत्कृष्ट विकासका लागि हजुरबुवा–हजुरआमा अत्यावश्यक ! यस्ता छन् ५ कारण – ताजा समाचार
बच्चाको उत्कृष्ट विकासका लागि हजुरबुवा–हजुरआमा अत्यावश्यक ! यस्ता छन् ५ कारण
आफ्नो हजुरबुवा–हजुरआमासँग बिताएका पल हाम्रो जीवनको सबैभन्दा अविष्मरणीय पलमध्येको एक हुन्छ । हजुरबुवा–हजुरआमाले कसैको पनि बालापनलाई सुखद बनाउन एउटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका हुन्छन् । जो बच्चा आफ्नो हजुरबुवा हजुरआमासँगै बस्छन् उनीहरुमा एक भिन्न प्रकराको बुझाई र एक विशेष प्रकारको समवेदना हुन्छ । यस्ता बच्चा सधैं खुसी, मिलनसार र आफ्ना सामान बाँडेर प्रयोग गर्ने किसिमका हुन्छन् ।
उनीहरुमा परिवारमा बस्ने र सबैको भावनाको सम्मान गर्ने विशेष कला हुन्छ । तर आज जसरी शहर बढिरहेको छ, हाम्रो कोठा साँघुरिँदै छ । यस्तोमा मानिसहरु एक्लै बस्न बाध्य छन् । अहिले धेरै व्यक्तिको आफ्नो सानो परिवारमा हुन्छ जसमा हजुरबुवा–हजुरआमा पाहुना बनेर आउँछन् । तर विज्ञानले पनि बच्चालाई आफ्नो हजुरबुवा–हजुरआमासँगै राख्नुपर्ने सुझाउँछ । विज्ञानलाई मान्ने हो भने जो बच्चा आफ्ना हजुरबुवा हजुरआमासँग बस्छन्, उनीहरु एक्लै बस्ने बच्चाभन्दा निकै भिन्न हुन्छन् । यसका पाँच कारणबारे जानकारी लिऔं ।
बच्चा खुसी र सुरक्षित हुन्छन्
आफ्नो जराबारे थाहा पाएर सिक्छन् धेरै गुण
भावनात्मक तरिकाले बलियो हुन्छन्
जब बच्चाले आफ्नो हजुरबुवा–हजुरआमासँग धेरै समय बिताउँछ तब उसँग कुनै पनि भावनात्मक वा व्यवहारसम्बन्धि समस्यासँग जुध्नका लागि ऊ थप समझदार हुनेगर्छ । पछि ठूलो भएपछि यही कुराले उसलाई कुनै पनि तरिकाको आघातको सामना गर्न सक्षम बनाउँछ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको एक अध्ययनमा पत्ता लागेअनुसार हजुरबुवा–हजुरआमाको सम्पर्कमा बस्ने बच्चा एक्लोपन, चिन्ता र डिप्रेशनजस्तो समस्याबाट कम पीडित हुन्छन् । उनीहरुले जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि बस्न सिक्छ । उनीहरुलाई हरेक मुश्किलको हल निकाल्न आउँछ ।
सिक्छन् नैतिक गुण
तपाईंका आमा–बुवा पनि खुसी र स्वस्थ हुन्छन्